Ny famoahana koronavirus dia manaparitaka tsipika famatsiana! | RayHaber | raillynews
HomeTORKIAFaritra Marmara34 IstanbulNy famoahana koronavirus dia manaparitaka tsipika famatsiana!
Ny famoahana koronavirus dia manaparitaka tsipika famatsiana!
26 / 03 / 2020 34 Istanbul, Railway, ANKAPOBENY, Highway, Tire Wheel Systems, Headline, Faritra Marmara, TORKIA
Ny fivoaran'ny coronavirus dia manapaka ny famatsiana famatsiana
Tamin'ny fipoahan'ny coronavirus dia hitanay mazava ny fiantraikan'ny valan'omby (fangatahana mihoa-pampana) amin'ny rojo famatsiana. Nanjary tsy hita maso ny vokatra sasany, foana ny talanty tsena ary efa nitombo ny vidiny. Nijanona ny orinasa famokarana noho ny olana momba ny famatsiana ampahany. Nandray fepetra fanampiny ny fanjakana mba hiarovana ny mpamokatra. Tetsy ankilany, nisy ny fipoahana momban'ny e-varotra. Ny serivisy ivelany dia nitombo tokoa.
Nanjary zava-dehibe ny halaviran-javatra. Tsy maintsy napetraka haingana ny rojo famatsiana ara-pahasalamana. Nijanona teo amin'ny sisin-tany ny fitaterana TIR ary niforona ny rambon'ny TIR. Ireo mpamily fiara no nanomboka nampiharina mandritra ny 14 andro. Tamin'ny fitaterana RO-RO dia tsy azon'ny mpamily fiara nentina ireo fiaramanidina ary nohafohezina ny fijanonany tao amin'ny vondrona Eropeana. Ilay tsy fahampiana efa nitondra fiara dia noforonina. Noho ny fanakorontanana amin'ny fitaterana an-dàlana dia niova ny fivezivezena amin'ny fiara fitaterana an-dranomasina sy ny lalamby. Nisy fiakarana lehibe ny tinady. Noho ny zava-misy fa tsy afaka ho lany ara-potoana ao anaty ranomasina ny tavoahangy fanafarana, rehefa nitombo ny fangalarana fitoeran-tany ao anaty seranana mpanondrana, nitombo ny vidin'ireo vidin-tsolika miaraka amin'ny toby fanadiovana. Voarakitra ny baiko maika ho an'ny fitaterana rivotra. Saingy, vokatry ny fanafoanana ny sidin'ny fiaramanidina mpandeha, dia nihena ny haben'ny enta-mavesatra ary nomena ny famandrihana homena azy ireo herinandro vitsy taty aoriana. Nitombo ny fotoam-pandresena vokatry ny fihetsehan'ny ranobe amin'ny sarety amin'ny fiampitan'ny sisin-dalamby. Vokany, tapaka ve ny famatsiana famatsiana? Eny. Ny fiantraikan'omby amin'ny famatsiana rojo dia tsy azo sakanana amin'ny alàlan'ny fampiarahana ny rojo famatsiana. Ny fampahalalana haingana sy marina dia ny olana fototra. Araka ny lazain'ny World Health Organization: "fitsapana, fitiliana, fitsapana". Ireo antoko tarika mpamatsy tolotra dia tokony handamina mialoha ny fandehan'ny vaovao haingana ary hiara-hiasa amin'ny fanavaozana ny asa. Tsy vahaolana ny vahaolana afovoany tokana.
Ny dingana izay nandehanantsika dia naneho amintsika indray ny maha-zava-dehibe ny lojika. Hitanay ny antony maha-zava-dehibe ny lojika amin'ny fanomezana ny serivisy maharitra mandritra ny faharetan'ny rantsana famatsiana eo amin'ny fahasalamana sy amin'ny fiatrehana ny filan'ny sakafo ara-pahasalamana, fahadiovana, sns. Ary koa ny curfew, tsy maintsy tanterahina ny filàna fototra amin'ireo tsy afaka mivoaka.
Ny sandan'ny famatsiana dia ny vidin'ny fividianana, famokarana ary ny logistics. Ny tsoakevitra avy amin'ireo fisehoana niseho vao haingana dia mampiseho fa mila manangana rojo famatsiana fanoherana bebe kokoa isika ary manavaka ny fepetra manjo ny loza sy aorian'ny asa. Mila mitady fomba varotra vahiny tsy mifandray amin'ny vanim-potoana misy ny areti-mifindra isika. Amin'izao fotoana izao, ny fampiasam-bolan'ny fotodrafitrasa izay hampiakatra ny varotra vahiny amin'ny alàlan'ny lalamby dia lasa zava-dehibe. Mazava fa ny fanovana ny mpamily eo amin'ny sisin-tany, ny fanovana ny boaty (feno, feno), ny fanovana semi-trailer ary ny fomba famongorana haingana dia mila fivoarana bebe kokoa. Tsy maintsy noforonina amin'ity zona buffer ity. Ireo làlana hafa sy vavahadin'ny sisintany dia tokony hojerena ary tokony hojerena ny vahaolana haingana momba ny fananganana. Ny firenena samy hafa dia manana taham-pidirana samihafa amin'ny lalana samy hafa. Ireo làlana mety dia azo namboarina amin'ny alàlan'ny fifanarahana vonjimaika miaraka amin'ireto firenena ireto.
Ny fe-potoam-pitsarana mandritra ny 14 andro ampiharina amin'ny fidirana amin'ny sisin-tany ho an'ny mpamily fiara dia tokony esorina amin'ny fampiharana haingana araka izay azo atao ary ny fidirana / fivoahan'ny Tiorka sy vahiny mpamily fiara mitondra ny taratasim-panadinana dia tokony avela arakaraka ny valin'ny fitsapana. Ny fitomboana dia tokony hatao momba ny faharetan'ny fijanonan'ny mpamily fiara any amin'ireo firenena EU. Ny fangatahana visa ho an'ny mpamily dia tokony hodinihina amin'ny maha-laharam-pahamehana azy ary ny visa vaovao dia tokony hatsangana amin'ny fanitarana ny fotoana. Miaraka amin'ny fandrindrana ny andrim-panjakana mifandraika amin'izany dia tokony hamoaka ny fandeferana izay hampiharina mandritra ny fotoana fiasàna sy fialan-tsasatra, izay tsy hisy fiantraikany amin'ny fiarovana, ary tokony hatao ny fanitsiana ny fotoana. Mba hanamorana ny fizotran'ireo varotra fanondranana an-dranomasina dia tokony hajanona ny fampihenana ny lanjan'ny Verified Gross Weight (VGM), ary ny talen'ny sambo dia tokony hangataka taratasy fanoloran-tena avy amin'ireo orinasa mandefa. Tokony hojerena indray ny rafitra mpamily / enta-pandrosoana sy ny famatsiana tachograph ny mpamily sy ny orinasa dia tokony hohamoraina sy manafaingana. Ny drafitra dia tokony hatao amin'ny fanomezana ny mpamily vaovao hiasa amin'ny fitateram-pitaterana iraisam-pirenena (fiofanana, ny fizahana, ny fanamarinana), ary ny fisian'ny Internet ny fiofanana sy ny fanadinam-pianarana SRR sy ny fanadinana ADR.
Ny asa fivelomana amin'ny mpiasam-panjakana dia manitatra ny fizotran'ny asa. Raha tokony hatao, tokony hanafaingana ny dingana amin'ny alàlan'ny fiantohana ny fampiasana tsara ny dingana vita amin'ny fanodinana taratasy sy ny fepetra tokony hatao mba hisorohana ny fahaverezan'ny asa amin'ny ambaratonga rehetra. Ao anatin'ilay fonosana nambara, tsy misy ny fanohanana manokana ho an'ny sehatry ny logistics, izay tena voakasik'izany fivoahana izany, afa-tsy ny tara ny fanambaràn'ny VAT mandritra ny 6 volana. Izany fanampiana izany dia efa nomena tamin'ny sehatra 16. Amin'ity vanim-potoana ity, ny SCT amin'ny solika, izay entana lafo vidy ho an'ny lozika dia tokony esorina ary tokony omena ao anaty fepetra ankasitrahana kokoa ny serivisy.
Amin'ny maha-dingana antonony, ny lalamby fitaterana lehibe mampifandray ireo lalamby iraisam-pirenena manarona ny firenentsika sy ny ivon-toerana / vohitra lozisialy natsangana amin'ireo mpanitsy ireo dia tokony ho tapa-kevitra hiarovana ny fivezivezena sy hampihenana ny loza.
Betsaka ny orinasa eto amin'ny firenentsika an-tery ato anatin'ireo rojo vy famatsiana manerantany. Tsy te hamokatra vokatra any amin'ny fireneny ny firenena any Andrefana. Torkia dia mitombo amin'ny fanondranana-mirona modely fampandrosoana. Na izany aza, tokony hoheverintsika ihany koa ny hoe miankina amin'ny akora manta isika. Noho izany dia tokony hamaritana ireo olana sedraina isika amin'ny fahazoana ireo akora ilaina ireo ary mifantoka amin'ny teboka vahaolana. Misy vokatra dia tsy vokarina any Torkia. Noho izany, tsy maintsy miaina ao anaty rojotra famatsiana manerantany isika amin'ny fotoana rehetra.
Ny zava-dehibe dia ny kajy ny risika rehetra ary handray ny fepetra ilaina. Ilaintsika ny manatanteraka ny fitantanana ny risika amin'ny fomba maimai-poana sy tsy tapaka amin'ny lafiny famatsiana famatsiana sy logistic ary hanamafy orina ny rafitra fitantanana krizy ao anatin'ny fotoana fohy. Noho izany dia tsy maintsy mitady fomba hifindra ara-toekarena avy amin'ny modely famatsiana ivon-toerana tokana ho an'ny modely famatsiana ivontoerana marobe isika. Tokony hamokatra vokatra stratejika amin'ny firenentsika isika.
Vokatr'izany dia misongadina indray ny maha-zava-dehibe ny safidy be loatra sy ny fahaizan'ny famatsiana famatsiana. Azo antoka fa ny safidy dia tokony hofaritana mialoha ny fizotran'ny lozika sy ny famokarana, ary ny fivoarana dia tokony arahi-maso amin'ny ankapobeny ary ny mety indrindra dia tokony ampiasaina arakaraka ny fepetra.
Profesora Dr. Mehmet TANYAŞ
Filohan'ny fikambanana Logistics (LODER)
Ny fivoahan'ny Coronavirus dia misy fiantraikany amin'ny isan'ny mpandeha Marmaray
IMM Nilazana ny hetsika manohitra ny fihanaky ny virtoaly amin'ny koronaria
Ny filoham-pirenena Şahin dia mandinika ny hetsika raisina amin'ny fanoherana ny valan'aretina virtoaly
Ny fihanaky ny fihanaky ny korôna dia misy fiantraikany amin'ny BURULAŞ
Ny tahotra ny Coronavirus mitombo ny fifamoivoizana ao Bursa!
Istanbul-Ankara tetikasa lalamby haingam-pandeha Geyve-Sapanca famolavolana sy fananganana…
Ny Kongresy 3.National Logistics sy ny Supply Chain dia manomboka ao Trabzon
Evraz amin'ny fiarandàlamby mankany amin'ny lalamby rosiana mandritra ny dimy taona
Ansteel dia manome lamasinina mavesatra ho an'ny haingam-pandeha haingam-pandeha amin'i Harbin-Dalian
Ansteel manome fiarandalamby mavesatra ho an'ny haingam-piaramanidina Harbin-Dalian
Tibnor dia manolotra vy ho an'ny sarety vy sarobidy nataon'i LKAB
Androany amin'ny tantara: 26 Martsa 1918 ao amin'ny Railway Hejaz
Snack ho an'ireo matihanina ara-pahasalamana avy amin'ny Izmir Metropolitan